भारतबाट फेरि बढेर आयो पेट्रोलको मूल्य,पट्रोल, डिजेल र मट्टितेल लिटरको कति पुग्यो त ? • raradiodarpan.com
भारतबाट फेरि बढेर आयो पेट्रोलको मूल्य,पट्रोल, डिजेल र मट्टितेल लिटरको कति पुग्यो त ?
भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ । आज (आइतबार) मा आएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ४.८४ रुपैयाँले बढेर १८३ रुपैयाँ २ पैसा पुगेको छ । यस्तै, डिजेको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ ०८ पैसाले बढेर १८३ रुपैयाँ १३ पैसा पुगेको नेपाल आयत निगमले जनाएको छ।
भारतीय आयत कर्पोरेसनले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार वर्तमान मूल्य र बिक्री परिमाणको आधारमा निगमको १५ दिनको घाटा १ अर्ब १९ करोड हुने जनाएको छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रहेको रकम विगतको घाटा पूर्ति गर्दा सकिसकेको र मे महिनामा निमगलाई भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी गर्न १० अर्ब भन्दा बढी रकम अपुग हुने निगमले जनाएको छ